I-WOWOW Matte Black Pull-Down Spray Kitchen Faucet - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela Phansi Oompompi Bekhishi / WOWOW Matte Black Pull-Down Spray Ikhishi ompompi
I-WOWOW inesipiliyoni sezimboni ekwenzeni umlingani ohamba phambili ukudonsa ompompi basekhishini kusukela ngo-2008. Ngenxa yalokhu okuhlangenwe nakho uyaqinisekiswa ukuba nompompi okahle kakhulu ekhishini lakho, owenzelwe ukusebenza kahle futhi ekugcineni ngomklamo oyingqayizivele. Ngalesi sizathu, le mibhobho ephezulu yekhishi elimnyama le-arc Matte ye-WOWOW iyona engcono kunazo zonke lapho udizayina noma uhlela kabusha ikhishi lakho.
2310700B Imiyalo Yokufaka
I-WOWOW Donsela phansi i-Faucets ekhishini 2310700B
Ikhishi kungaba yindawo endlini yakho lapho uchitha khona isikhathi sakho esiningi. Akukhona nje kuphela ukuthi ikhishi yindawo lapho ulungisa khona ukudla kwakho. Ngokwengeziwe, abantu abaningi bagxile ezimpilweni zabo ekhishini. Cabanga ngokwesibonelo ekhishini lokudlela elinetafula elikhulu lokudlela eduze kwalapho kwenziwa khona ukudla. Noma ngabe hlobo luni lwekhishi onalo, ukwakheka nokusebenza kuyizinto ezimbili ezibaluleke kakhulu kulo. Uma udizayina noma uhlela kabusha ikhishi lakho lamaphupho, ufuna ukwenza umbono omkhulu. Ukukhethwa kompompi wasekhishini ngenxa yalokho kubaluleke kakhulu. Yize ompompi basekhishini bengahle babe bancane, yizindawo zemvelo ezigxilwe kunoma yiliphi ikhishi. Ukubona kwabantu ngokwemvelo kudonswa ompompi basekhishini. Ngakho-ke nakanjani uzokwenza umxhwele nge-WOWOW's high arc matte black donsa phansi ompompi basekhishini! I-WOWOW matte black donsa phansi umpompi wasekhishini unikela ngekhwalithi ephezulu yokudonsa ompompi basekhishini ngomklamo omuhle ngentengo ephansi kakhulu. Ngakho-ke le matte emnyama idonsa phansi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ikunikeza isilinganiso esingcono kakhulu sokusebenza ozosithola emakethe.
Ukwakhiwa okune-Stylish donsa phansi isikebhe ekhishini ku-matte mnyama
I-WOWOW ephezulu ye-arc matte emnyama idonsa phansi isikebhe ekhishini ifakwa ngomklamo ophefumulelwe ngokwezifiso ovuselelwe ngemininingwane yesitayela sanamuhla. Ngalesi sizathu, leli faucet ekhishini lizokwengeza ukuthinta okucishe kube yiliphi ikhishi. Ngokusobala kuzofanele ukhethe isikebhe sakho ekhishini kahle. Ngendlela ezokwakha ubumbano olulodwa lobuhle nabanye ukwakhiwa kwekhishi lakho. Inzuzo yale matte emnyama edonsa phansi isikebhe ekhishini ukuthi ingahlanganiswa nemiklamo yendabuko, kanye nemiklamo yanamuhla yekhishi. Kungayiphi indlela, i-matte emnyama ye-WOWOW idonsa phansi isikebhe ekhishini izokuqinisekisa ngokumangalisa kokuqeda cishe kunoma iyiphi ikhishi. Lokhu akugcini ngokunikeza isikebhe esimnyama ekhishini sokunikeza umklamo omncane. Ukulula kungenye yezimpawu ezibalulekile zalokhu kukhiye wekhishini lokuklama. Noma kunjalo, ihlinzeka ngesitatimende somklamo omangalisayo ngombala wayo oyingqayizivele nokuhlanganiswa okuhlukile kwezitayela. Ukuze sibe neqiniso, e-WOWOW sibheka le matte emnyama ukudonsa isikebhe ekhishini isiqeshana sobuciko! Siyaqiniseka ukuthi uma usebenzisa lesi isikebhe sokudonsa phansi ekhishini lakho siqu, kuzoba nemiphumela eminingi yokumangala yezivakashi zakho
Mate omnyama wehlise isikulufu sokufakelwa ngokusebenza okuphezulu ekhishini lakho
Umklamo munye, kepha okubaluleke kakhulu ukusebenza kwesethiphu ekhishini. Uma usekhishini lakho ku-aDesign yinye, kepha okubaluleke kakhulu ukusebenza kwesethiphu ekhishini. Uma usekhishini lakho nsuku zonke, ulungiselela ukudala okuyisimanga okuyi-cortic, ufuna ukukuxhasa ngenkathi ulungisa ukudla nokuhlanza kamuva. Njengomphumela, kufanele ukhethe isikebhe sokukhishini esekela izifiso zakho maqondana nazo zonke izinhlobo zemisebenzi yasekhishini. I-WCOW ephezulu ye-arc matte emnyama idonsa phansi isikulufu ekhishini yenzelwe ukukunikeza ukusebenza okuphezulu. Akungenzi ize, i-matte emnyama idonsa phansi isikebhe ekhishini ibhekwa njengenye yezinto ezisebenza kahle kakhulu ezidonsa izimbotshana zasekhishini emakethe. Ingxenye yokudonsela phansi yale faucet ekhishini emnyama yemishini isebenza kahle. Okokuqala, ungakhipha kalula ikhanda lesitshizi sokuzithobayo ukuze uhlanze zonke izingxenye zekhishi lakho elisinki. Ngemuva kokusebenzisa ukudonsa ikhanda, izobuyela esimeni sayo sokuqala. Ngaphandle kwalokho ungashintsha ngokunethezeka phakathi kwesithambile nesithambile kanzima ngokuya ngomsebenzi wakho wasekhishini. I-swivel adaptha ye-matte emnyama idonsa phansi isikebhe ekhishini ekugcineni izokunikeza ukuguquguquka okudingayo.
Insimbi engenantambo ye-matte emnyama idonsa ifenisha ekhishini
I-Wowow's matte emnyama idonsa phansi isikebhe ekhishini yenziwa ngensimbi engenacala nezinye izinto ezisezingeni eliphakeme. Le faucet yasekhishini edonsa phansi ayigcini ngokuqinile kodwa futhi ingamelana nokugqwala futhi ayihambelani namabala. I-WOWOW matte emnyama idonsa phansi isikebhe ekhishini ngakho-ke kulula ukuyihlanza. Ukuswayipha okulula kuzosusa yonke insali yamaminerali kanye noshoko owakhela phezu kwekhanda le-silicone. Isikebhe ekhishini ngokwaso kulula ukusicoca futhi ibala ngeke linamathele kulo. Ukuhlanzwa njalo kwefenet ekhishini lakho elimnyama kuzokuqinisekisa ukukhuthazela kwempilo ende. I-arc matte emnyama ephezulu idonsa phansi isikulufu sefenisha ye-WOWOW kulula kakhulu ukuyifaka futhi iza nemiyalelo ecacile yokufaka. Njengoba ilawula ukujikijela phambili ngamadigri angama-90, ikuvumela ukuthi ufake lesi isikebhe esimnyama ekhishini ezindaweni ezinobunzima, ngaphandle kokuthola imvume yokuphikisana nayo. Abaklami be-WOWOW ngakho-ke bacabange cishe ngakho konke ukuklama le matte emnyama ukudonsa isikulufu sasemkhishini. Ngakho-ke i-WOWOW ingesabi ukukunikeza iwaranti yeminyaka emithathu ekhasini layo elimnyama lokudonsa phansi ikhiphi ekhishini. Siyaqiniseka ikhwalithi yemikhiqizo yethu futhi siqinisekisa ukuthi yakho izoba nentokomalo ephezulu futhi imikhiqizo yethu izosebenza ngokufika kwayo. Lapho noma yisiphi isizathu lesi isikebhe ekhishini singase singasebenzi njengoba ulindele kithi, sizothatha umkhiqizo ngaphandle kwenkokhelo yakho eyengeziwe. Ekugcineni, sinikeza inqubomgomo yokubuya kwamahhala yezinsuku ezingama-90 uma kungenzeka ukuthi isikebhe esimnyama semakhishi esimnyama singabi yilokho obekulindelwe kukho. Njengoba ukwazi ukubona, sithembela kumuntu wethu omnyama ukudonsa isikulufu sasemkhishini. Ngenxa yalokho singalindela kuphela ukuthi uzokweneliswa ngo-100%!
Izinzuzo ze-WOWOW high arc mate ezimnyama zidonsa phansi isikulufu sokukhishini ekhishini ngamafuphi:
Inika i-wow-factor kunoma iyiphi ikhishi
Inhlanganisela ehlukile yomklamo wakudala nowanamuhla
Ukunikeza ukusebenza okuhle kakhulu okuhlangabezana nezidingo zakho
Hlanganisa ama-esthetics ngokusebenza okuphezulu
Kwenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme
Kulula ukuyihlanza futhi kulula ukuyigcina
Iwaranti yeminyaka emi-3 kule-arc mate emnyama idonsa phansi isikebhe ekhishini
I-SKU: 2310700B Categories: Donsela Phansi Oompompi Bekhishi, Ikhishi Faucets Tags: I-Arc ephezulu, Matte Black, Donsela Phansi
21.65 x 11.02 x amasentimitha angu-2.76
Umpompi wasekhishini / usinki wasekhishini one-spray down
Zinc ingxubevange / Insimbi engagqwali / Brass
I-Single-Hole & 3 Hole; I-Deck-Mount
I-Arc ephezulu / iGooseneck
1-Hole noma 3-Hole nge 8 intshi Deck Plate Covering
Izindlela ezintathu: Sakaza / Sula / Misa isikhashana
Isixhumi tap / Imisebenzi emithathu yokulawula amanzi
I-WOWOW Kitchen Sink Mixer Thepha Khipha I-Spru Bru ...
I-WOWOW Pot Filler faucet Ngaphezulu kwe-Stove Chrome
I-WOWOW Wall Mount Pot Filler Kitchen Faucet